အလုပ်များလွန်းတဲ့ချစ်သူကို “ဒီနေ့ပဲ လက်ထပ်လိုက်ရအောင်”ဆိုပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး - thadinmann
We Share About Knowledge
Home / News / အလုပ်များလွန်းတဲ့ချစ်သူကို “ဒီနေ့ပဲ လက်ထပ်လိုက်ရအောင်”ဆိုပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
အလုပ်များလွန်းတဲ့ချစ်သူကို “ဒီနေ့ပဲ လက်ထပ်လိုက်ရအောင်”ဆိုပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
Admin October 10, 2019 News
ချစ်သူကောင်လေးကို တအားချစ်လွန်းတဲ့မိန်းကလေးဟာ တစ်ခြားမြို့ကိုရောက်နေတဲ့ကောင်လေးဆီ လေယာဉ်စီးပြီးအရောက်သွားခဲ့ကာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါစုံတွဲဟာ ဒီ အောက်တိုဘာလမှာလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ ကမှလက်ထပ်မှတ်ပုံတင် တင်သွင်းထားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ကောင်မလေးဟာ သူနာပြုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ ကောင်လေးဟာ မီးသတ်သမားဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်လုံးအတော်လေးအလုပ်များနေခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်းကောင်မလေးဟာ ရည်ရွယ်ချက်တွေပျက်စီးသွားတာမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူမတာဝန်ကျနေခဲ့တဲ့ Hefei မြို့ကနေ ချစ်သူရှိရာ Yancheng မြို့သို့အရောက်သွားပြီး ချစ်သူကိုSurprise လုပ်ကာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒါကြောင့် သူမရဲ့ချစ်သူ Jiang Wei ကို Surprise လုပ်ဖို့အတွက် ချစ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အကူအညီအနည်းငယ်တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ် ။ သူမ Yancheng မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Jiang Wei တာဝန်ကျရာဌာနသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက Jiang Wei ကိုညာဖက်လှည့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ လုံဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့ရတဲ့ပုံစံဖြင့် သူမ သတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာကို Jiang Wei မြင်တွေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ ထို့နောက်သူမဟာ မိုက်ကိုကိုင်ပြီး ” ကျွန်မက သူနာပြု ၊ ပြီးတော့ရှင်က မီးသတ်သမား ၊ အဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့မှာ အချိန်ပိုနေတာမျိုးမရှိဘူး ။ ရှင်လည်း Hefeiမြို့ကိုလာပြီး ကျွန်မနဲ့လက်ထပ်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး ။ အဲ့ကြောင့် ကျွန်မရှင့်ကိုလက်ထပ်ဖို့ Yancheng မြို့ကိုရောက်လာခဲ့တာ ။ ဒီနေ့ပဲ လက်ထပ်လိုက်ကြရအောင် ” ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
Jiang Wei ဟာ သူ၏သတို့သမီးရဲ့ ရင်ကိုလှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့အပြုအမှုမျိုးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ မျက်ရည်ကျလျက်ဖြင့်ဒူးထောက်ကာ ” ငါ့ကိုလက်ထပ်မှာလား ” ဆိုပြီး သတို့သမီးလောင်းချစ်သူကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့ပါတော့တယ် ။ သတို့သမီးလောင်းဟာ Jiang Wei နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရဖို့ခရီးနှင်လာခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချက်ချင်းကို လက်ထပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ် ။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း အဆိုပါချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလှတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသူများကတော့ ဖုန်များထုတ်ကာ အမိအရမှတ်တမ်း Video များရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အဆိုပါစုံတွဲလေးရဲ့ ရိုးရှင်းလွန်းလှတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကို Jiang Wei ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့စခန်းထဲတွင်ပင် စီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
Credit Mckzone Daily,Source: worldofbuzz
အလုပ်များလွန်းတဲ့ချစ်သူကို “ဒီနေ့ပဲ လက်ထပ်လိုက်ရအောင်”ဆိုပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး Reviewed by Admin on October 10, 2019 Rating: 5
@2017-2020 thadinmann.com. Powered by Blogger.
<script async="async" data-cfasync="false" src="//native.propellerclick.com/1?z=2826060"></script>
Celebrity Knowledge & Lifestyle News
www.thadinmann.com မှာ ဖျောပွထားတဲ့ သတငျးတဈခြို့ဟာ ကိုယျပိုငျမဟုတျပါ။ အငျတာနကျစာမကျြနှာမြားပျေါမှာ ပွနျ့ကြဲနတေဲ့ သတငျး နဲ့ ဓါတျပုံတှကေို လူအမြားကွညျ့ရှုနိုငျဖို့ အခြိနျနဲ့တပွေးညီ တငျပွခွငျးသာဖွဈပါတယျ။
thadinmann.com တှငျ ရေးသားဖျောပွတဲ့ သတငျးနဲ့ဓါတျပုံတှေ မှတဈပါး အခွားသတငျးနဲ့ဓါတျပုံမြားဟာ သကျဆိုငျသူမြားရဲ့ မူပိုငျသာဖွဈပါကွောငျး အသိပေးအပျပါတယျ။